Zvipfeko zvekupfeka → Zvipfeko zvinoshanda
Zvipfeko isarudzo yezvigadzirwa zvinoshanda mumaindasitiri akasiyana siyana. zvishongedzoiyo yatinopa muchitoro chedu zvigadzirwa kubva kune vanogadzira vatinoshanda navo mukuendesa kwembatya nemicheka.
Iwe unogona kuve nechokwadi chekuti ivo vane zvemhando yepamusoro. Isu tinoshanda nema brand akavimbika asingangonakirwe chete nemaonero akanaka, asi zvakare chenjera kuwedzera huwandu. Muchikamu ichi unogona kutenga, pakati pevamwe zvisungo, masiki kana nhoo dzekudzivirira kumeso.
Chipo chatinopa ndechekuti chakakumikidzwa kumakambani ese uye vatengi vakazvimirira. Thanks nguva dzose basa reboka uye maodha makuru, isu tinogona kukupa iwe anoyevedza mitengo kutanga kubva kune chimwe chinhu. Iko kune mukana weyezve dhisikaundi kune akakura maodha.
Zvipfeko zvekupfeka chinhu chisinga tsanangurike chekupfeka kune wese munhu ane hanya nemufananidzo wakazara uye unopindirana. Tayi yemafashoni inokwana zvine mutsindo nehembe, uye kana iyo hembe iine yakakwenenzverwa neyemunhu logo kana yakashongedzwa chaiyo yekambani, inowedzera mbiri yekambani uye inokurudzira kuvimba kwakanyanya mushandi.
Tie Yakagadzirwa nemucheka unogara wakakora wakakora, isingakanganisike kwenguva yakareba, zvese kuti zviite senge nyowani nekureba sezvinobvira. Iyo tayi inotengwa nechido kuti inatsiridze chipfeko chevashandi vepahotera padhesiki rekutambira uye kune vanomirira nevatsigiri.
Masiki ekudzivirira emuromo nemhino, ayo anouya akasiyana akasiyana, achiri kufarirwa. Iko kuwanda kwemavara kunokutendera iwe kusarudza chimwe chinhu kune vakuru nevana. Masiki akasonerwa mukamuri yedu yekusonesa, nekutenda kune izvo isu tine chokwadi nezve izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa uye nemhando yekugadzirwa.
Izvo zvakagadzirwa nemachira akachengeteka akagadzirwa nezvinhu zvakavimbiswa, izvo zvisina chero zvigadzirwa zvine chepfu. Isu tinotengesa masiki anoshandiswazve uye masiki anoraswa. Isu zvakare tine mamask ane homwe yeficha inotsiviwa.
Cotton chifukidzo, graphite
Kune avo vane hanya nekunyaradzwa kukuru uye rusununguko rwekushandisa nehuswa hwechiso panguva imwechete, takagadzira mhando mbiri dzeheti. Tine ngowani dzakazara kumeso Yakagadzirwa nekotoni visor uye mask uye mini ngowani inovhara husiku nemiromo, kunyanya yakasununguka kune vanhu vakapfeka magirazi. Zvigadzirwa zvedu zvinosangana nemitemo inodiwa.
Mini mhino nemuromo ngowani
Ngowani izere kumeso
zvipfeko zvekupfekazvipfeko zvevarume